Madaxweyne Xasan: “Waxaan culayska saarnay Nabadda iyo Deganaanshaha, si loo dhiiri-geliyo Maalgashiga Shisheeyaha. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Madaxweyne Xasan: “Waxaan culayska saarnay Nabadda iyo Deganaanshaha, si loo dhiiri-geliyo Maalgashiga Shisheeyaha.
Madaxweynaha DFS, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkaasi ku sheegay Wareysi Khaas oo Wakaalladda Wararka Shiinaha ee XINHUA siiyey muddadii uu ka qeyb galayey Shir-madaxeedkii Shiinaha iyo Afrika oo lagu soo gebagebeeyey magaalladda Johansburg ee dalka Koonfurta Afrika.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay inay Dowladiisa soo dhaweynayaan Maalgashiga Shisheeyaha, isagoo xusay in wax weyn laga qabtay Nabadda iyo Deganaanshaha Somalia.
Waxa uu intaasi ku daray inay Ciiddanka Dowladda iyo kuwa AMISOM waxay horumar ka gaareen Dagaalka ay kula jiraan Alshabaab, waa sida uu hadalka u yiri.
“Ka hor, Dowladda Somalia waxay maamuli jirtey 6 Degmo oo ka mid ah 17-ka Degmo ee magaalladda Muqdisho, waxaan dib u qabsanay inta badan Degmooyinkii ku jiray gacanta Alshabaab” ayuu yiri, waxa uu intaasi ku daray inay Alshabaab haatan maamulaan Deegaano aad u kooban, balse aysan ku sugnayn magaallooyinka waa weyn iyo Degmooyinka.
Dhinaca kale, Madaxweynuhu waxa uu wareysiga uu siiyey Wakaalladda Wararka ee XINHUA aad uga hadlay Xiriirka soo-jireenka ee Dowladaha Somalia iyo Shiinaha, wuxuuna xusay inay Dowladda Somalia aad u danaynayso in la xoojiyo Xiriirka Shiina iyo in ay Dowladda shiinaha taageero ka geystaan xal-u-helista Dhaqaalaha, Siyaasadda iyo Ammaanka Somalia.
Waxa uu tilmaamay in Taageeradda Farsamadda iyo Maaliyadda ee Shiinaha taageero ka geysan doonaan Horumarinta Kheyraadka Badda, Beeraha iyo dhismaha Wadooyinka.
Dhinaca kale, Madaxweynaha waxa kaloo uu Wareysigiisa ku soo hadal-qaaday Kulankii uu dhigiisa dalka Shiinaha, Xi Jinping la yeeshay muddadii uu Shir-madaxeedka Iskaashiga Afrika iyo Shiinaha (FOCAC) ka socday magaalladda Johansburg ee dalka Koonfurta Afrika.
Waxa kaloo uu sheegay inuu Madaxweynaha Shiinaha ballanqaaday inuu Taageero ka geysan doono Dib-u-dhiska Somalia, si ay Tusaale ugu noqoto Dhabaha Maalgahiga, isla markaana ay Wafdi Shiinaha imaan doonaan si ay gacan uga geystaan Xaalladda Ammaanka iyo meelaha kale ee Faragelinta u baahan.
Webmaster 16240 posts 0 comments
Askar Kenyan ah oo dhimasho iyo dhaawac kala kulmay Qarax Miino